नेपाली कांग्रेसको बैठक आज सकिदै,गर्यो यस्तो निर्णय » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाली कांग्रेसको बैठक आज सकिदै,गर्यो यस्तो निर्णय
शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२ मा प्रकाशित !
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महासमितिको बैठक र जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको मिति र स्थान तय गर्ने भएको छ । केन्द्रिय समितको बैठक १३ दिन सम्म जारी छ । एक महिना अघि सुरु भएको बैठक नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबशादुर खड्काको निधन भएपछि बिचमा रोकिएको जियो ।
शनिबार सकिन लागेको बैठकले महासमिति बैठकको मिति र स्थान को साथै जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको मिति र स्थान तय गर्न लागेको हो ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समिति सदस्यहरुले बोल्ने क्रम सकिएको कताएका छन् । शनिबार महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिहरु पनि गठन गरिने जानकारी दिए ।
उनले आज अन्तिम दिन आउने महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यक्त भएका धारणाहरु, जिल्ला जिल्लाबाट मागेका समिक्षाका प्रतिवेदन र पार्टीका विभिन्न स्थानमा भएका भेलाबाट आएका राय सुझाव समावेश गरिने बताए ।
कांग्रेसले बैठक मार्फत निर्वाचनको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्ने छ । केन्द्रीय समिति बैठक गत चैत ९ गते देखि सुरु भएको थियो । चैत १६ गते केन्द्रीय सदस्य खुम बहादुर खड्काको निधन भएपछि शोक मनाउन बैठक केही दिन स्थगित गरिएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: पौडेलले लगाए देउबा माथि यस्तो आरोप
NEXT POST Next post: महिनावारी पर सार्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ८ प्राकृतिक तरिका
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, बैशाख १५, २०७५ १५:३२